Billboard Music Award ပွဲကိုတက်ရောက်ရန်အတွက် BTS အဖွဲ့ဝင်များ US ကိုရောက်နေသတဲ့
On May 15, 2018 June 4, 2018 By Naing Naing
မေလ ၁၃ ရက်နေ့က BTS အဖွဲ့သားတွေဟာ Los Angeles သို့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ Incheon လေဆိပ်မှနေပြီး ထွက်ခွာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီမတိုင်ခင်က BTS အဖွဲ့သားတွေက သူတို့တတွေ မေလ၂၀ ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ကျင်းပမယ့် ဆုပေးပွဲတစ်ခုမှာဖျော်ဖြေတင်ဆက်ဖို့ရှိတယ်လို့ အသိပေးထားခဲ့ပါတယ်။ BTS ဟာ ၂၀၁၇ တုန်းကလည်း ‘Top Social Artist’ အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါသေးတယ်။
အခုသူတို့တွေမေလ ၂၀ ရက်နေ့မှာ တက်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့ ပွဲလေးကတော့ Billboard Music Award (BBMAs) ပွဲလေးပါ။ BBMAs ပွဲကိုမတက်ခင်နှစ်ရက်အလိုမှာ သူတို့တွေရဲ့ Comeback Album လေးဖြစ်တဲ့ ‘Love Yourself: Tear’ အခွေလေးကို ထုတ်ဝေဖြန့်ချိမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ BTS အဖွဲ့သားတွေဟာ ‘The Ellen Degeneres Show’ မှာပါဝင်ဖျော်ဖြေဖို့လည်း ရှိပါသေးသတဲ့ရှင်။ ဒီ Show ပွဲလေးပြီးမှ Las Vegas မှာကျင်းပပြုလုပ်မယ့် BBMAs ပွဲကိုတက်ရောက်ကြမှာပါဖြစ်ပါတယ်။ BTS တွေရဲ့ အောင်မြင်မှုက အရမ်းခမ်းနားလွန်းအားကြီးပါတယ်ကွာ…?။
ကိုရီးယားမှာကျန်ခဲ့တဲ့ BTS Fan တွေအတွက်လည်း BBMAs ပွဲပြီးတာနဲ့ သူတို့တွေရဲ့ Comeback Album Promotion ပွဲကို ကျင်းပပေးသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ BBMAs ပွဲမှာ BTS အဖွဲ့သားတွေဟာသူတို့ရဲ့ သီချင်းအသစ်လေးနဲ့ ပါဝင်ဖျော်ဖြေကြမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ ဒီပွဲလေးကို မေလ ၂၀ ရက်နေ့ တောင်ကိုရီးယားစံတော်ချိန် ည ၈ နာရီအချိန်မှာ ထုတ်လွှင့်ပြသမှာပါ။ ဒါကို BTS Member တွေက သူတို့ရဲ့ Official Twitter အကောင့်နဲ့ Instagram ကနေပြီး Countdown လေးတစ်ခုလုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။
ကဲ.. BTS Member တွေရဲ့ လတ်တလော activities တွေလည်းသိပြီဆိုတော့ Fan တွေကျေနပ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်…။ ကိုယ်တော်ချောလေးတွေရဲ့ ချစ်စရာ Photo လေးတွေကိုရှုစားရင်း အချစ်တွေတိုးပေးကြပါဦးနော်..။
Mark your calendars – in justaweek, we’ll be at the BBMAs stage! #BTS_BBMAs #방탄소년단 의 빌보드 뮤직 어워즈 무대, 단 1주일 밖에 남지 않았습니다!?
A post shared by BTS official (@bts.bighitofficial) on May 13, 2018 at 5:48pm PDT
Ref: (1), (2)
PREVIOUS POST Previous post: Cardi B ဘာကြောင့်သူ့ Instagram account ကိုဖျက်သွားခဲ့ရတာလဲ??
NEXT POST Next post: Instagram ပေါ်က Follower အများဆုံး Celebrity ဆယ်ယောက်